Slow Internet connections သမားတွေအတွက် Youtube Feather အသုံးပြုနည်း | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Slow Internet connections သမားတွေအတွက် Youtube Feather အသုံးပြုနည်း
Posted on November 19, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Slow Internet connections သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Youtube ကနေဇာတ်ကားတွေကို ကိုယ်ပိုင် Link နဲ့ Movie တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်ဖို့ နည်းပညာလေးတစ်ခုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မည်သည့်ကြော်ငြာ မည်သည့်အနှောက်အယှက်မျှမရှိပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲရင်လည်း ပုံမှန် Youtube မှာဆိုရင် downloaded 52 Kilobytes လောက်ပဲသွားပါတယ်။အခုကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်နဲ့ဆိုရင် ‘YouTube Feather’ while 391 Kilobytes ထိသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။Download Speed မြန်ဆန်ကြောင်းလက်တွေ့တွေ့ရမှာပါ။
YouTube Feather အသုံးပြုနည်း…….
1) YouTube Feather Beta page လေးကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်လိုက်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ…
ဒါဆိုရင် မျှားပြထားတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်ပေါ်လာတ့ဘောက်ကနေ အီးမေးလ်အကောင့်ဝင်ခိုင်းပါမယ်။အီးမေလ်းအကောင့်တစ်ခုခုဖြင့်ဝင်လိုက်ပါ။ ၀င်ပြီးရင် ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာါမယ်။ မျှားပြထားတဲ့အတိုင်းနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Youtube ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ
ဒါကတော့အကောင့်ဝင်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့စာပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိကြည့်ချင်တဲ့ Movie ကို ရေးပြီးရှာလိုက်ပါ။
အရင်အတိုင်းပဲပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မျှားပြထားတဲ့ ‘Just This once’ ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ။If you haveaslow internet connection then video buffering takes lots of time that you cant watch the video fluently. But Youtube has an alternative version known as ‘Youtube Feather’ which increases the loading time of any Youtube page and reduces the total amount of bytes downloaded by the browser so that the videos can be load with the lowest latency possible and can run smoothly.
To achieve faster speed Youtube, Youtube feather limited many not so useful features like suggestions, posting comments and the couple of other things.
You can easily notice the difference between the regular YouTube videos and YouTube Feather. Not only in terms of faster streaming without buffering but also in terms of the amount of data downloaded by the browser. For instance, the browser downloaded only 52 Kilobytes of data foravideo in ‘YouTube Feather’ while 391 Kilobytes in the standard YouTube page.How to switch to YouTube Feather?Switching to YouTube Feather is simple and takes justafew clicks.1, Visit YouTube Feather Beta page here .2. Click on the link that says Join the “Feather” Beta and you are done.How to switch back to standard YouTube ?You can switch back any time to standard youtube by clicking the given link in lower right of the page.It shows two options: ‘Just This once’ and ‘Permanently’ .
Just this once: To watch that particular opened video in regular mode
Permanently: To switch back to the regular mode Permanently.
or, you can go to YouTube Feather Beta page main page from here and click on the link that says Leave the Feather Beta.
This entry was posted in နည်းပညာ, နည်းပညာနှင့်ဆိုင်သော, နည်းပညာနှင့်ဆိုင်သော. Bookmark the permalink.
← Register Internet Download Manager FREE!! ဒေါင်းလော့စ်မန်နေဂျာအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ !!!	AndroZip™ Pro File Manager v4.6.8 APK →